Home » Hawaii Travel News » Tifitra nirehitra tao anaty hotely Hawaii: Gunman ao amin'ny Kahala Hotel & Resort any Honolulu
Na eo aza ny COVID-19 ny Aloha Ny State of Hawaii dia efa niaina fahatongavan'ireo mpitsidika amerikana. Androany tsy ny mpitsidika ihany, fa niverina tany Honolulu ny fampihorohoroana.
Notifirina ny tifitra iray tao amin'ny Kahala Resort sy Hotel akaikin'i Waikiki ao amin'ny Nosy Oahu ao amin'ny fanjakana amerikanina Hawaii
Ny fanatrehan'ny polisy mavesatra dia manandrana mifehy ny toe-draharaha, ka manome baiko ny vahiny tsy afaka mamindra toerana hipetraka ao amin'ny efitrano fandefasana baolina.
Nifarana tamin'ny 3 maraina ny fiatoana niaraka tamin'ny lehilahy mitam-basy, manamboninahitra amerikana iray namono tena tao amin'ny efitranon'ny hotely tao amin'ny Hotely Kahala sy Resort.
Fampihorohoroana ao amin'ny Paradisa ao amin'ny Hotely Kahala 5 km miala an'i Waikiki ao amin'ny faritry Diamond Head. Ny toeram-pialamboly amoron-dranomasina lafo vidy dia malaza noho ny feso.
Ny fiaran'ny polisy ao Honolulu dia misy hazavana mirehitra eny amin'ny làlambe H1 vao maraina androany ho any amin'ny hotely fandraisam-bahiny taorian'ny antso an-tariby 911 izay nitifitra olona voatifitra. Lehilahy iray, noheverina ho vahiny, dia nitifitra ny bala teo amin'ny lavarangana efitra iray.
Toa nanao barazy tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny iray tao amin'ny rihana faha-4 tao amin'ilay hotely ilay basy. Araka ny tatitra iray momba ny KHON-3, mety ho mpikambana ao amin'ny tafika amerikana ilay mitam-basy.
Nafindra toerana ny polisy. Inoana fa misy mpiasa na vahiny voahidy ao amin'ny efitrano fandihizana.
Rehefa nanantona ny efitranony ny polisy dia nitifitra ireo manamboninahitra izy. Talohan'ny nahatongavan'ireo polisy dia nitifitra ny mpiasan'ny hotely ilay olona nitam-basy nitifitra ny varavarany.
Ny sary dia nalain'i Rex Jakobovitz tao anaty Kahala Resort. Hoy izy: “Ao anatin'ny efitrano filamatra miaraka amina olona 100+ mihidy aho. Ekipa Swat any ivelany. Ny polisy niaraka tamin'ny basy lava nanondro ny lavarangana, nikiakiaka tamiko hihazakazaka tao anatiny, dia nanao izany aho. Misy olona mitomany. ”
ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny hotely.
Voahodidin'ny mpampihatra lalàna ny trano fandraisam-bahiny, ary tsy misy ny tatitra momba ny ratra amin'izao fotoana izao.
Ireo mpizahatany an-trano avy any amin'ny tanibe Etazonia dia mitsidika ny State amin'ny isa marobe, na dia eo aza ny COVID-19 pendemika mitohy.
Mpizaha tany manoloana ny Kahala Hotel & Resort
Tsy misy tatitra momba ny fanaovana takalon'aina, saingy tsy mazava ny zava-misy.
Tantara mandroso izany. eTurboNews any Honolulu dia manaraka ary havaozina raha miova ny toe-javatra.
Raha ny tatitra nataon'ny vavolombelona nahita maso dia raiki-tahotra ny vahiny. Ora vitsy taorian'ny fitifirana tamin'ny 10 alina dia mbola nanandrana hiresaka amin'ilay lehilahy mitam-basy ny mpirakidraharaha polisy. Ny toe-javatra dia nidina avy amin'ny toe-javatra mpitifitra mavitrika taorian'ny ora efatra.
Nifarana tamin'ny 3 maraina ny fiatoana tamin'ny alahady maraina niaraka tamin'ilay lehilahy mitam-basy, manamboninahitra amerikana iray namono tena tao amin'ny efitranon'ny hotely tao amin'ny Hotely Kahala sy Resort.
Ny Kahala Hotel & Resort dia nifantoka tamin'ny fahasalamana sy ny fiarovana ny vahininy, ny mpiasa ary ny fiarahamonina eo afovoan'ny areti-mandringana Covid-19. Mampanantena ao amin'ny tranonkalany ny trano fandraisam-bahiny fa mazoto izy ireo hanome ny serivisim-pahavitan'ny Kahala amin'ny ambaratonga avo kokoa amin'ny fahasalamana sy fiarovana.
Lahatsary bebe kokoa ao amin'ny Kahala Resort, Oahu, Hawaii taorian'ny tatitra fa nisy lehilahy iray nanapoaka basy teny amin'ny lavarangana. Mampiseho ny SWAT miditra amin'ny hotely ny horonan-tsary. pic.twitter.com/iRmBLxs1f8
- Anthony Quintano Photography (@AnthonyQuintano) Aprily 11, 2021
Nakatona ireo toerana fialamboly Thailandy noho ny fiovaovan'ny COVID-19